MSI PS63 Modern 8SC က Content Creator တွေအတွက် အကောင်းဆုံး Laptop လား?? - PX
MSI PS63 Modern 8SC က Content Creator တွေအတွက် အကောင်းဆုံး Laptop လား??
2019 မှာ Gaming Laptop ထုတ်လုပ်တဲ့ Company တွေက Laptop တွေကို Gamer တွေအတွက်ကြီးပဲ သီးသန့် ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်တွေကို ကျော်လွန်လာပြီလို့ ပြောရမှာပါ။ မြန်မာပြည်အတွက် MSI Gaming Laptop တွေက နေရာတစ်ခု ယူထားသလို 2019 ထုတ် MSI Laptop တွေမှာလည်း Gaming ဆိုတာထက် Content Creator တွေအတွက်ပါ စဉ်းစားပြီးထုတ်လုပ်ထားတာကို မြင်တွေနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူက Content Creator ဖြစ်တာကြောင့် Laptop တွေမှာဆိုရင် သယ်ယူရ လေးလံတဲ့ Gaming Laptop တွေထက် ပေါ့ပါးပြီး Performance Ultra-book တွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားလေ့ရှိပါတယ်။ အာ့ကြောင့် MSI Concept Show တစ်ခုမှာ Gaming ထက် ကိုနဲ့ပိုကိုက်ညီတဲ့ MSI PS63 8SC ကို စမ်းသုံးရင် Review လုပ်ြ။ဖစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။
MSI မှာ Line up တွေ အများကြီးရှိတယ် များသောအားဖြင့် Gaming Line up တွေများတယ် အဲ့ထဲကမှ PS Line up ကတော့ ပေါ့ပါးပြီး Performance ကောင်းတဲ့ Ultrabook Line up လို့ပြောရမှာပါ။ အခြား RTX သုံး P Series တွေလည်း ရှိပေမဲ့ PS Line-up တွေက P Series တွေနဲ့ယှဉ်ရင် တစ်ဆင့်နိမ့်တယ်လို့ပြောရမှာပါ။ စာရေးသူသုံးနေတဲ့ PS63 က International မှာဆိုရင် ရွေးချယ်စရာ ၃ မျိုးရှိတယ်လို့ပြောရမှာ မြန်မာပြည်မှာတော့ ၂ မျိုးပဲ ဝယ်ယူလို့ရမှာပါ။ Basic Model ကတော့ Core i7-8565U CPU, 16GB of RAM,a512GB NVMe SSD နဲ့ Nvidia GeForce GTX 1050 Ti GPU (Max-Q) with 4GB of RAM ဖြစ်ပြီး Review လုပ်ထားတဲ့ Model ကတော့ GTX 1650 ကိုတပ်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက မြန်မာပြည်မှာ ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ Model ဖြစ်ပါတယ်။ International မှာတော့ GTX 1050 နဲ့ ထပ်ထွက်ပါသေးတယ်။
MSI ရဲ့ PS63 Modern ကို International မှာတော့ 16 x 16 x 16 ဆိုပြီးတင်စားထားပါတယ်။ 16 millimeters ရှိတဲ့ Keys တွေ၊ 1.6kg Weight တွေ နဲ့ 16 Hours ခံတယ်ဆိုတဲ့ Battery Life တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ PS63 က ဈေးကွက်ထဲမှာဆိုရင် သူနဲ့အပြိုင် ZenBook Pro တို့ Acer Aspire5တို့ ရှိနေပါတယ်။ သူ့ဈေးနဲ့ Specs အနေအထားဆိုရင် PS63 အနေနဲ့လည်း သူ့ပြိုင်ဘက်တွေကြားမှာ ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာ ဆက်ကြည့်ဖတ်လိုက်ရအောင်…
Design, Build Quality & Weight
ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ပေါ့ပါးမြန်ဆန်တဲ့ Premium Laptop လို့ထင်ရတဲ့ အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပေမဲ့ Ultrabook Crazy တွေအတွက်တော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် လုပ်ထားတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ Unique ဖြစ်တဲ့ Stylish Laptop ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။ Lid ဖက်ခြမ်းမှာ Metal အသားကိုမှ Flat Design ကိုသုံးပေးထားတယ်။ ကိုင်လိုက်တဲ့အခါ နူးညံတဲ့ ကြမ်းရှရှလေးကို လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဘေးဘောင် တွေမှာလည်း Blue Line လေးနဲ့ edge လေးကို ဝိုက်ပေးထားတာက အမြင်လည်းဆန်းသလို လှပသေသပ်နေတာကိုတွေရပါတယ်။ အခြား Laptop တွေလို မိမိရဲ့ တံဆိပ်ကို ဖော်ပြလွန်းတဲ့ Lid အဖုံးမျိုးမဟုတ်ပဲ MSI Dragon Logo ကို ရေးရေးလေး ကျောဘက်ခြမ်းမှာထည့်ပေးထားပါတယ်။ အမှတ်တစ်မဲ့ ကြည့်ရင် မြင်ရမှာတောင်မဟုတ်ဘူး သေချာကြည့်မိတဲ့အခါ မြင်တွေ့နိုင်ပြီး Laptop နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ အရောင်မျိုးကို သုံးပေးထားတာပါ။ Color Theory အရ Lid ပေါ်မှာ Logo ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ Design က Analogous Design ဆန်ပါတယ်။ Main Color နဲ့ သိပ်မကွာတဲ့ အရောင်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် သုံးထားတာမျိုးကို ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Body မှာ သုံးထားတဲ့ မှိုင်းပြပြ အပြာရောင်လေးကို လိုက်ဖက်တဲ့ တောက်ပနေသော အပြာရောင် အစွန်းချယ်ထားတာတွေ၊ သိပ်မကွာလှ Logo အရောင်လေးတွေက Design ပိုင်းကနေကြည့်ရင် Premium Look ဖြစ်ပါတယ်။
Lid အတွင်းဘက် Display ဘောင်ကိုတော့ Plastic နဲ့ ကာပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ အဆိုပါဘောင်မှာလည်း MSI တံဆိပ်ကိုတောင် ထင်သာတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲ ပုံဖော်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Display အထားအသိုပုံစံမှာ Supper narrow display bezel ဖြစ်တာကြောင့် ဘေးဘောင်လေးတွေ ပါးနေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ အပွင့်လင်းဆုံးပြောရင် ပါးတာကို လက်ခံပေမဲ့ Dell XPS 13 တို့ 15 တို့နဲ့ယှဉ်ရင် အနည်းငယ်ထူနေသေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပါးလာတာလေးက ခေတ်မှီတယ် မိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပါ။ ပိုမိုက်တာတစ်ခုက အခြား Laptop တွေရဲ့ Display က ဘောင်တွေပါးလာဖို့အတွက် Web cam ကို အောက်ဖက်သို့ရွှေ့လိုက်တာများပါတယ်။ ဒီ PS63 မှာတော့ Web cam ကို မူလနေရမှာပဲ သေးငယ်စွာထားပေးထားတာက အတော်လေး သဘောကျစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါကတော့ Dell XPS တွေနဲ့ယှဉ်ရင် ကွာခြားချက်ဖြစ်ပြီး ASUS ZenBook တွေကဲ့သို့ လှပနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
Body မှာလည်းဆိုရင်လည်း Metal Body ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်။ Lid လိုပဲ Trackpad ရဲ့ အစွန်းတွေကို တောက်ပတဲ့ အပြာအစွန်းလေးတွေနဲ့ ခြယ်သထားတယ်။ Trackpad ရဲ့ ဘယ်ဘက် အပေါ်ထောင့်မှာမှ Fingerprint Scanner ကိုထည့်ပေးထားတယ်။ Keyboard Layout ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်း အောက်ထောင့်မှာဆိုရင် PRESTIGE ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ထွင်းပေးထားတယ်။ ညာဘက်ခြမ်းမှာတော့ PS63 Modern 8SC မှာပါတဲ့ Key Selling Point တွေကို စကောကပ်ပေးထားတယ်။ Body ရဲ့ အောက်ခြေဘက်ခြမ်းမှာဆိုရင် လေဝင်ပေါက်တွေနဲ့ Seal တံဆိပ်စာတွေကို တွေ့ရမှာပါ။ Body ရဲ့ အောက်ခြေ Cover ကို ပေါ့ပါးတဲ့ Metal ကိုလည်းသုံပေးထားပါတယ်။
ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ အကောင်းတွေကြားထဲမှာ အဆိုးတစ်ခုကတော့ Lid နဲ့ Body ကြားက Hinge ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Laptop တစ်ခုလုံးနီးပါး Metal Quality မျိုးရအောင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး Hinge ကို Plastic သုံးပေးထားတာက အတော်လေး ဝမ်းနည်းစရာပါ။ နောက်တစ်ခုက Exhaust တွေကိုလည်း အဆိုပါ Hinge ကနေ Display ဘက်သို့ စွန့်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အထင် Heat Management ကောင်းအောင် (သို့) အပူဒဏ် ခံနိုင်အောင်လို့ Plastic ကိုသုံးလိုက်တာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ Dell XPS ဆိုရင် အပေါ်ဘက် Display ဘက်သို့ စွန့်ထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ Display ကနေ ကျောဘက်ခြမ်းသို့ စွန့်ထုတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပွင့်လင်းဆုံးပြောရင် Dell အထားအသိုကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ ဒါမဲ့ ဒီကောင် အပူစွန့်ထုတ်တဲ့ Exhaust ကလည်း သုံးစွဲတဲ့သူကို စိတ်ပျက်စေလောက်တဲ့အထိမျိုး မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက Hinge ကနေ Exhaust စွန့်ထုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ အဲ့အပူက စာရိုက်နေတဲ့ လက်ကို ထိခိုက်တဲ့အထိ အပူပြန်မလာသလို Laptop အတွက်လည်း Heat Management ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ ဘာလို့ Hinge မှာ Exhaust ထည့်ရလည်းဆိုရင် Lid ကိုဖွင့်တဲ့အခါ Lid အောက်ခြေက Body ကျောဘက်အောက်ခြေကို ပိတ်သွားစေလို့ ဟ နေတဲ့ Hinge ကနေ အပေါ်သို့ စွန့်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Design နဲ့ Build Quality ပိုင်းကို Overall အမြင်အရဆိုရင် ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ပါးလွှာပြီး ကောင်းတဲ့ Laptop ဆိုတာသေချာပါတယ်။ အချို့ပိုင်းလေးတွေမှာ စိတ်အလိုမကျတဲ့တာလေးတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ – Lid ကိုအလွယ်တစ်ကူ ဖွင့်လို့ရအောင် ရည်ရွယ်ပြီး Body မှာ အချိုင့်လေးထည့်ထားပေးထားတာမျိုးတို့ Hinge မှာ Build Quality ခိုထား တာတို့တာတို့က စာရေးသူအပေါ် စိတ်အလိုမကျဖြစ်စေပါတယ်။ နောက်ထပ် သဘောကျတာတစ်ခုက Metal Body သုံး Laptop ဆိုပေမဲ့ အနည်းငယ် လေးလံမှုရှိလိမ့်မယ်လို့ မထင်ရပဲ ပေါ့ပါးနေတာပါ။ ဒီတစ်ချက်က Laptop အလေးကြီးတွေကို သယ်ရတာ မုန်းတဲ့ သူတွေအတွက် Impressive ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီအပိုင်း Designer တစ်ယောက်အနေနဲ့ အပြစ်ပြောရမဲ့အပိုင်းဖြစ်လာတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ 15.6 inch, 1080p Display ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ Color အရောင်အရည်အသွေး ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ ZenBook Pro တို့ကိုမမှီသေးပါဘူး။ sRGB ကို 100% နီးပါးရတယ်ဆိုသော်လည်း Color စုံလင်မှုပိုင်းမှာ ပြိုင်ဘက် တွေဖြစ်တဲ့ ZenBook 15 တို့ XPS 15 တို့နဲ့ယှဉ်ရင် မျက်နာငယ်ရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ sRGB ဆိုတဲ့ Color Gamut တွေထဲက အနိမ့်ဆုံး Color Space ပါ။ အဲ့ဒီ အနိမ့်ဆုံး Color Space ဖြစ်တဲ့ sRGB ကို 100% နီးပါးရောက်အောင် True Color Technology နဲ့ ဖန်တီးထားတာတောင် 88% လောက်ပဲရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ Color စုံလင်မှုပိုင်းမှာ အနိမ့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Color Space ကိုတောင် ပြည့်စုံအောင်မလုပ်သေးနိုင်ပဲ Content Creator အတွက်ရည်ရွယ်လိုက်တာက အတော်ဆိုးတဲ့ စိတ်ကူူးလို့ပြောရမှာပါ။ ဒါက အပြစ်လို့ဆိုလိုက်တာထက် ပြိုင်ဘက်တွေက sRGB တောင်မဟုတ်ဘူး Adobe RGB နဲ့ လန်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ချိန်မှာ ဒီကောင်က နည်းနည်းမျက်နာငယ်ရတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ Color မှန်ကန်မှုပိုင်းမှာလည်း လိုအပ်ချက်တွေရှိတာကြောင့် Adobe Software များသုံးနေချိန် အရောင်နဲ့ Export ထုတ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ အရောင်များ ကွဲလွဲမှုရှိတာတွေ ကြုံတွေ့တဲ့ အနေအထားက ဘယ်ဟာမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာ ဝေခွဲရခက်ပါတယ်။
အဆိုးထဲက အကောင်းလို့ပြောရမလားမသိ True Color Technology က အသုံးဝင်တဲ့ Software လို့ပြောရမှာပါ။ သူ့မှာပါတဲ့ Tuning Display က အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ Quality ကို ပြန်ထိန်းသွားတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ Gamer, Anti-Blue, sRGB, Designer, Office and Movie mode တွေမှာ စိတ်ကြိုက်အနေအထားပြောင်းလို့ရတဲ့အတွက်အကြောင့် အဆိုးထဲက အကောင်းလို့ပြောရမှာပါ။ သင့်သာ Designer တစ်ယောက်ဆိုရင် Designer Mode ကို ပြောင်းသုံးတာအကောင်းဆုံးပါ အဲ့ Mode ကနေ RGB Color Space တွေ Color Temperature တွေ Red, Green, Blue တွေ Brightness တွေ Contrast တွေ ချိန်ညှိလို့ရတဲ့အတွက် Color ပိုင်းမတိကျမှုတွေမှာ ပြန်ထိန်းနိုင်သွားလို့ပြောရမှာပါ။ Gaming Laptop မဟုတ်တဲ့အတွက် Refresh Rate အနေနဲ့ 60Hz လောက်ထိပဲပါတယ်။ ဒါကလည်း မလိုအပ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့ မထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးဘောင်း ပါးပါးလေး Display ဖြစ်တာကြောင့် ရုပ်ရှင်ကြည့် Game ဆော့တဲ့အခါ တွေ့မြင်နေကြမဟုတ်တဲ့ Feeling ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Dual bottom-firming speakers ကိုထည့်ပေးထားတယ်။ အသံက Body အောက်ခြေကနေ လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အသံအနေအထားက အကျယ်ဆုံးမဟုတ်တောင် Medium room လောက်ကို လုံလုံလောက်လောက် ကျယ်နေတာကိုတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ Clearity ဖြစ်တယ် အသံအနေအထားက Speaker က အဆုံးထိချဲ့လိုက်လို့ အက်လာတာမျိုးတွေ သိပ်မရှိဘူးအဆင်ပြေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အားနည်းချက်ကတော့ Bass အသုံးများတဲ့ track တွေမှာ Bass အသံကို သိပ်မကြားရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ Nahimic software ပါတဲ့အတွက် အသံပိုင်းဆိုင်ရာမှာ စိတ်ကြိုက်ကလိလို့ရပါတယ်။
Port တွေနဲ့ပက်သက်ရင် အသုံးဝင်တဲ့ Port တွေကို ပြည့်စုံအောင်ထည့်ပေးထားတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ တစ်ခုပဲ Network Port တော့ပါဝင်လာခြင်းမရှိပါဘူး။ ညာဘက်ခြမ်းမှာဆိုရင် USB-3.1 ၂ ခုနဲ့ microSD Reader port ကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာဆိုရင် USB-3.1(Type-A) Port ရယ်၊ USB Type-C ရယ်၊ HDMI ရယ်၊ Headphone Jack တို့နဲ့ Charging Port တို့ကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒါမဲ့ Concept အမှားလို့ပဲပြောရမလားမသိဘူး Laptop ရယ်ရွယ်ချက်နဲ့ ပါဝင်တဲ့ Port တွေကြားမှာ ကွဲလွဲနေတာတစ်ခုရှိပါတယ် အဲ့ဒါက microSD Port ပါ။ တစ်ချက်လောက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် Laptop က Content Creator တွေအတွက် ဦးစားပေးထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ Content Creator ဆိုကတည်းက Graphic Designer တွေ ဓာတ်ပုံဆရာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလူတွေ ပိုအသုံးဝင်တဲ့ Port က ရိုးရိုး SD Card Port ပါ။ ဒါကို microSD ထည့်ပေးထားတာက အသုံးဝင်ရမှာလည်း အသုံးမဝင်ရဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါမဲ့ မပါတာထက်စာရင် ပါနေတာက ကောင်းပါတယ်လို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။ တွေးကြည့်ရင် လွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးထားသလိုနဲ့ ခက်ခဲနေပါတယ်။
Port တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ပိုသဘောကျစရာကောင်းတဲ့အချက်က USB Port တွေက Quick Charge 3.0 Support လုပ်ပါတယ်။ အာ့ကြောင့် Fast Charging ရတဲ့ သင့် Smartphone ကို အားသွင်းမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးမြန်ဆန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ Laptop တိုင်းမှာ ပါလေ့မရှိတဲ့ အမိုက်စားတစ်ချက်ပါ။ ဒါမဲ့ Quick Charge ကိုသုံးလို့ရဖို့အတွက် Creator Center မှာ System Tuner ထဲက QC 3.0 မှာ Quick Charge Mode ကို သွားပြောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Data Communication တွေမှာ Quick Charge on ထားရင် ဖုန်းတွေနဲ့ Data ကူးလို့မရတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အာ့ကြောင့် ဖုန်းနဲ့ Data တွေကူးချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ Mode သွားပြောင်းဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။
Keyboard and Track-pad
Keyboard ပိုင်းမှာဆိုရင် Key Size လေးတွေက 16mm ရှိတဲ့အတွက် လက်ကြီးတဲ့သူတွေကော အဆင်ပြေပါတယ်။ Keyboard Design တွေက MSI ရဲ့ Traditional Partner ဖြစ်တဲ့ Steelseries Design နဲ့ဆင်တူတာကိုတွေရပါတယ်။ Key travel က 1.2mm ရှိတဲ့အတွက် Dell XPS တို့ထက် ရှည်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ နှိပ်လိုက်တဲ့အခါ Key တစ်ခု ဝင်သွားတဲ့ Feeling လေးက အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ စာရေးသူအတွက်တော့ ZenBook အရသာလောက်သိပ်မတွေ့ပါဘူး။ ဒါမဲ့ အရင် Model တွေနဲ့ ယှဉ်ရင ်နိပ်လို့ပိုကောင်းလာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Keyboard Design Layout က ပြောင်းလဲမှုအချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။
MSI က ဘာအကျင့်လည်းမသိဘူး Gaming Laptop တွေမှာလည်း Win Key ကို ညာဘက်ခြမ်းထားလိုက်သလို အခု PS63 မှာ Win Key ကို ဘယ်ဘက်မှာ ပြန်ထားလိုက်ပြီး Function Key ကို ညာဘက်ထားလိုက်တာပါ။ ဖြည့်တွေးရရင် Function Key နဲ့ တွဲသုံးတဲ့ Shortcut တွေကို Arrow Key တွေနဲ့ ပေါင်းထားလိုက်တဲ့အတွက် ညာဘက်လက်ကနေ သုံးလို့ လွယ်အောင် ရွှေ့လိုက်တယ်လို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။ Backslash key ကိုလည်း Space bar နဲ့ တစ်တန်းထဲ ညဘက်ခြမ်းမှာ ထားလိုက်ပါတယ်။ နောက်ထပ် Fn Key ကို ဘာညာက် ရွှေ့လိုက်ရတာက Space bar ကို သေးအောင်လုပ်ဖို့ အဆင်မပြေတော့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရိုက်တဲ့အခါ အသံအရမ်းကြီးဆူတာမျိုးမဖြစ်ပဲ Clicky အနည်းငယ်ဖြစ်တာကို ခံစားရပါတယ်။ Butterfly ထက်ပိုကောင်းတယ်ဗျာ :P Back Lit Color အနေနဲ့ RGB မဟုတ်ပဲ White Color ကိုပဲ အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
Track-pad အထားအသိုလေးက မိုက်တယ် Body တစ်ခုလုံးရဲ့ အလယ်တည့်တည့်မှာ နေရာတကျ ရှိသလို အလျားရှည်ရှည်လေးနဲ့ လှလှပပထည့်ထားပါတယ်။ MacBook တွေလို့ ကြီးလာတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဘေးတိုက် ရှည်လာတာဆို ပိုမှန်တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ Blue Edge လေးနဲ့ လှပနေသလို Track-pad ရဲ့ Responses က တိကျမြန်ဆန်တယ်လို့ပြောရမှာပါ။ Track-pad gestures ပိုင်းမှာဆိုရင် Windows Precision Driver ကို သုံးထားတဲ့အတွက် three-finger feature တွေကို မြန်မြန်မှန်မှန်နဲ့ အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Intel Core i7-8565U Processor, RAM 16GB နဲ့ 512GB M.2 SSD တို့ပါဝင်ပါတယ် GPU ပိုင်းမှာတော့ Nvdia GTX 1650 ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Performance ပိုင်းမှာ အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင် Content Creator တွေအတွက် အေးဆေးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါကို အတွေးမှားပြီး လုံလောက်တယ်ထင်ပြီး Ultrabook နဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားစာ Edit လုပ်နေရင်တော့ သင်မိုက်လွန်းရာ ကျသွားလိမ့်မယ်။ စာရေးသူ စမ်းသုံးကြည့်တဲ့ Software တွေက Adobe Creative Cloud 2019 ပါ။ Chrome tab အခု ၂၀ လောက်ဖွင့်ပြီး Photoshop တို့ Premiere Pro တို့ သုံးကြည့်တာ Loading ပြဿနာမျိုး မတွေရသလောက်အဆင်ပြေပါတယ်။ Photoshop ဆိုရင်လည်း Layer တွေအများကြီးစမ်းသုံးကြည့်တာ အဆင်ပြေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ နောက်ထပ်သဘောကျတာက Video Editing Preview တွေမှာ မထစ်မငေါ့ပဲ အဆင်ပြေနေတာပါ။ 10min စာ 4K Video ကို Rendering ချတာ 15min လောက်အချိန်ယူပါတယ်။ ဒါက အခြား i7 8th Gen HQ တွေနဲ့ယှဉ် 50% လောက် ပိုအချိန်ယူတယ်လို့ပြောရမှာပါ။
အခြား Gaming နဲ့ Benchmark နဲ့ပက်သက်ရင်တော့ သေချာတော့ မစမ်းရသေးတဲ့အတွက် နောက်မှအသေးစိပ်ရေးတင်ပေးပါဦးမယ်။ (Gaming Laptop မဟုတ်တဲ့အတွက် Recommend မပေးချင်ပေမဲ့ GTX 1650 Max-Q နဲ့ ဒီ Specs အရ Gaming တော်တော်များများကို Full HD Ultra Setting နဲ့ 60fps အထက် အေးဆေးဆော့လို့ရပါတယ်) 120Hz Display မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Quality မြင့်မြင့် ဆော့ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆို မကိုက်ပါဘူး။ ဒါမဲ့ သေချာသလောက် ကျွန်တော် ပြောသလို ဂိမ်းတွေကို ဆော့လို့ရပါတယ်။
Battery ပိုင်းမှာတော့ သူက 16 hours ခံတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီစကားမှားတယ်လို့မပြောချင်ပါဘူး။ သုံးကြည့်သလောက် ၁၁ နာရီဝန်းကျင်ထိပဲ ခံပါတယ် ဒါကလည်း Powerful (Brightness အမြင့်ဆုံးသုံး) သုံးလို့ပါ။ ပုံမှန် ရုပ်ရှင်ကြည့် Browse မလုပ်ပဲ Office လောက်ပဲသုံးဆို 16 hours ခံကောင်ခံပါလိမ့်မယ်။ Battery ကတော့ 82WHR (4 Cell Li-Po) ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်သုံးနေချိန် အပူလွန်ကဲတာမျိုးမဖြစ်ဖူးပါ။ ဒါမဲ့ Laptop လက်ထဲစရောက်တုန်းက ဘယ်ဘက်ခြမ်း Exhaust ဘက်က အသံနည်းနည်းလေး ဆူပါတယ်။ နောက် Windows Update လုပ်ရင်း Driver Update ပြုရင်း အသံပျောက်သွားသလိုဖြစ်သွားတယ်။ သေချာမပြောတတ်တာက အသံကို ယဉ်သွားတာလား Software ကြောင့်လား ဆိုတာပါ သေချာတာကတော့ လုံး၀ ဆူထွက်သလိုမဖြစ်တော့ဘူး။ နည်းနည်း Adobe Software တွေ ၃ ခုလောက် Run လိုက်မယ် (Premiere Pro, After Effect and Photoshop) အဲ့အပြင် Chrome Browser မှာလည်း Tab ၁၅ ခုလောက်ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင် အသံအရကော Heat ပါ တတ်လာပါတယ်။ ဒါမဲ့ Heat က Keyboard ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ သင့်လက်ကို လာနှောက်ယှက်သလောက်ထိ မဖြစ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ ကျွန်တော်အထင် သုံးနေတဲ့ အခန်းတွင်းအပူချိန်နဲ့လည်း နည်းနည်းလည်း သက်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ သိသိသာသာ Heat တတ်လာတာ မထူးဆန်းပါဘူး Adobe နဲ့ Chrome ကလည်း RAM သိပ်ကြိုက်တာဆိုတော့…
PS63 မှာ နောက်ထပ်မိုက်တဲ့ Creator Center Software လေးပါပါတယ်။ အဲ့ထဲက System Tuner ထဲမှာ ကိုနဲ့အဆင်ပြေသလို ပြောင်းချိန်ပြီး အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Creator တွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ Software ပါ အဲ့ Software ကနေတဆင့် ကိုသုံးချင်တဲ့ Program တွေကို CPU/Rendering အတွက် Thread ဘယ်နှခုသုံးမယ်၊ Memory နဲ့ GPU ကို Optimize လုပ်မယ် စသဖြင့် လိုအပ်သလို ချိန်ညှိလို့ရပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင် MSI PS63 က ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် အားသာချက်ကော အားနည်းချက်ပါ ပြည်စုံနေတဲ့ Laptop တစ်လုံးလို့ပြောရမှာပါ။ Design နဲ့ ပက်သက်ရင် Minimalist ဖြစ်ပြီး Premium ဆန်သလိုရှိပေမဲ့ Display ရဲ့ Color ပြည့်စုံမှုပိုင်းနဲ့ Brightness ပိုင်းတို့မှာ ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် တစ်ဆင့်နိမ့်နေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဈေနှုန်းချင်းပိုင်းဆိုရင် $1400 ဆိုတာက ASUS ZenBook UX433 တို့နဲ့ တန်းတူဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါမဲ့ ပိုအားသာချက်တစ်ခုက GTX 1650 ကတော့ သူ့ဝန်းကျင်မှာ သူပဲ ရနိုင်သေးတာက မက်လောက်စရာပါ။ Creator အစစ်တစ်ယောက်အတွက် Display ပိုင်းကတော့ ထည့်ကိုစဉ်းစားရမဲ့ ပြဿနာပါ။ ဘယ်လိုလူတွေအတွက်ပိုသင့်တော်လည်းဆိုရင် Creator တစ်ယောက်လည်းဖြစ်မယ်။ Game ကိုလည်း စွဲစွဲလန်းလန်းမဟုတ်ပဲ အနေအထားတစ်ခုလောက်ထိဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအထက် သင့်တော်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ $1400 ဆိုတာ မြန်မာပြည်အနေအထားနဲ့ တန်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လည်း International မှာဆိုရင် Base Model ကို $1399 ဖြစ်ပြီး GTX 1050 နဲ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာက $1400 နဲ့ GTX 1650 ကိုရမှာဆိုတော့ International နဲ့ယှဉ်ရင် အများကြီး ပိုတန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံး အပိုအနေနဲ့ပြောချင်တာက Packing Design တွေအစ MSI Laptop တွေနဲ့ကွဲထွက်ပြီး လှပသေသပ်စွာ ထုတ်လုပ်ထားတာတွေကိုတွေ့ရမှာပါ…
မြန်မာငွေ ၆ သိန်းခွဲဝန်းကျင်ရှိတဲ့ Black Shark2Pro ကို Xiaomi မှ မိတ်ဆက်
Galaxy Fold ဟာ iPhone 11 ထြက္ရိွမယ့္ September 18-20 ေလာက္မွာ ထြက္ရိွႏိုင္တယ္လို႔ သတင္းမ်ားထြက္